XOG:- Maxay ahayd Sababtii MD Farmaajo uu xilka uga qaaday Agaasimaha Villa Somalia + Waa kuma Agaasimaha cusub.
May 16, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Somalia, Wararka Maanta 0
Hadaba waa Kuma Agaasimaha loo magacaabay Madaxtooyada Somalia?
Dr. Nuur Diiriye Hersi (Fuursade), wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan, sanadkii 1952dii. Wuxuu tacliinta Hoose iyo xifdinta Qur’aanka ku bartay isla magaaladii uu ku dhashay. Waxbarshada Dhexe iyo Sare waxa uu ku qaatay Dugsiyada Bartamaha iyo Raage Ugaas ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay oo ay taariikhdu ahayd 15-ka Maajo, 2019 u magacaabay inuu noqdo Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Xigasho: Wakaaladda SONNA